Ubugebengu idrama Thriller "Umthetho Ezithobela Citizen" (abadlali nezinhlamvu abangu kweso ayazise baxgeki) kuyinto ngemva kokubuka imizwa kunalokho okuxubile. Ukususa kwefilimu ngabanye, owahamba yedwa ngokumelene uhlelo, ukuze ajezise izaphula-mthetho, iqondiswe by F. Buyela Umva Mpunga is ngokucacile hhayi wathola Melika. Nokho, esondweni ifilimu zisuswe efanele abanekhono ukwakhiwa ngesakhiwo isinyathelo okujabulisa, izinhlamvu eziklanywe ngokucophelela, bephonsa umlingisi abakhaliphile icasula kangaka imibono "hackneyed" yokuziphindiselela ngokulambisa uqaphela.
Usakhumbula konke kwaqala kanjani
Umlingisi lomcoka - isakhamuzi ezigcina umthetho, obuye umkhiqizi, Dzherard Batler ekuqaleni wayehamba ukwenza ibhayisikobho ekhuluma ngeqhawe elithile ejele umqondisi Frank Darabont. Ngaphezu kwalokho, kule nguqulo yokuqala umlingiswa oyinhloko wathukuthela wagan 'efana hero Tima Robbinsona (okuyilona kulapho ehlakaniphile, baze bevalelwa esitokisini) izithombe "I Shawshank Redemption", okuyinto wethulwa izilaleli ngo-1994, Darabonton ovelele. Iqiniso lokuthi Frank nje ezikhethekile "setilongweni" indaba ephathwayo, kodwa "Redemption" wacibishela ngebuciko, "The Green Mile," kodwa ngasizathu simbe, nge Butler bengazange basebenze, futhi Darabont ngokuxhamazela kwesokunxele iphrojekthi. Futhi F. Gary Gray kwadingeka ehlukahlukene indaba banal yokuziphindiselela notwa incazelo zefilosofi ukucindezeleka ngokwengqondo isitayela imidwebo abalwe ngenhla. Futhi movie "Umthetho Ezithobela Citizen," nabalingisi owaphefumulela wokuphika umqondisi, liphendukele Thriller ashukumisayo nge okwesabisayo, ukubulala elimangalisayo futhi olwalusikisela ehloniphekile zokuziphatha.
Sakaza asakazwe iphrojekthi wabe engazinzile. Ekuqaleni, abadali wabona njengoba Raysa Dzherarda Butler, kodwa violin main kwakufanele abe Dzheymi Foks (akwaziwa inganqotshwa noma ilahleke kule ifilimu "Umthetho Ezithobela Citizen"). Lo mlingisi, ogama isithombe igcwele yonke kwabezindaba abadume enikelwe ebhayisikobho - the Butler eyodwa wayebuye umkhiqizi ifilimu, njengoba sazi sonke: "Ngubani lokhokhela - the piper ubiza ingoma." Ngakho lapho efuna ukudlala "villain", izindima abadlali emuva. Kodwana ungacabangi ukuthi Dzherard Batler, sibambe isimo sabo ekhethekile ngokohlelo lokuhlelwa oyibamba, "weba ingubo phezu kwakhe." Ukuba zizosebenza kinopoektom futhi inkanyezi Catherine Zeta-Jones, kodwa ekugcineni ukukholisa actress ayiphumelelanga, kodwa isixhumanisi eziqine movie "Umthetho Ezithobela Citizen" - nabalingisi izindima. Abalingisi muhle, yonke into ngakho ngakujwayela izithombe zabo, baye baphila izimpilo izinhlamvu zawo, ukuthi abagcini nje kuphela ngokukholelwa, kodwa futhi bayazwelana. Gerard Butler ukuguqulwa eziyingqayizivele ehloniphekile indoda nomndeni e ill Combinator futhi kumuntu osonile ngobuqili kuyinto ukumangala bangempela futhi injabulo. UClyde yakhe Shelton kuyinto onekhono kakhulu futhi engaqondakali kakhulu, futhi emehlweni protagonist ingafaniswa ukubukeka, "villain okunjengalokho lokuqala" - Hannibal Lecter. A okuhle kufanele aqanjwe ekuguquleni Dzheymi Foksa e umshushisi "okubi-ezinhle" Nika Raysa, ikakhulukazi zikhunjulwe Gait yakhe - onesibindi, siqiniseka nje ashaye amandla angaphakathi. Ukuze lokhu esebenza duo kungekho Isimangalo esisodwa.
Minor, kodwa abalulekile
Ngesikhathi ebuka amafilimu izethameli liyadingeka zikhunjulwe ukuze uthole enye i umlingisi kusukela movie "Umthetho Ezithobela Citizen" - Bryus Makgill owanikeza ubuntu bakhe Jonas Cantrell kuyinto charm ukuthi bemangele. Futhi yabakhanga umshushisi umsizi Sarah uLowell (Leslie Bibb), izinhlamvu uDetective Dunnigan (Kolm Mini) kanye Rupert Ames wabheka ehloniphekile (Dzhosh Styuart). Ngenxa isenzo uhlamvu ezincane akuyona yayizovela ngo ngxabano ngiswa abasemqoka abazizwa kwaba ashukumisayo, ahlukahlukene futhi kujabulise.
Uma ikhaya umlingiswa oyinhloko Clyde wavele thugs ukubulala indodakazi yakhe encane futhi umkakhe amthandayo. Ngenxa incompleteness kohlelo zokwahlulela is phansi isijeziso fair ingenye nje we amashinga, nabanye ukunikeza iminyaka emithathu kuphela. Eminyakeni eyishumi Clyde dabukisa ukuchamisela uhlelo yokuziphindiselela kulabo abangazange wenza umzamo ukuze ajezise lesimbi ngokugcwele yomthetho, kuhlanganise owayo Ummeli Nick. Futhi Shelton iqala ukusetha icebo lakhe ku ukubulawa, hhayi umklomelo trifles. villain Owasinda abaguliswa abafanelwe ukujeziswa, ngemva lokubulala protagonist unikela Amaphoyisa (ngaphambili nqunu). Uma ejele, UClyde no uqala okuhlaselayo kuwo wonke uhlelo abangaphelele zokwahlulela: ukuhleka usula, ukuxoxisana, ukuze lokuqola, ukwesabisa. Shelton yonke imisebenzi yayo uzobe ephelezelwa izidingo esimweni sokungalandeli umthetho - sizonikeza umshushisi ne izidumbu ezintsha - lena isiqinti movie "Umthetho Ezithobela Citizen" (nabalingisi abadali voltage umjovo benza konke ababengakwenza).
dissonance engqondweni yethu
Abagxeki abaningi bangase baphikise ngokuthi ababhali baye benza iphutha turning Clyde ngingajabule futhi lusizi e umbulali ononya kuyilapho. Ngempela, ekuqaleni ifilimu umbukeli akunakwenzeka bahlala banganandaba kuya iqhawe onesifo ukubulala amehlo ingane yena nowesifazane uthanda. Futhi-ke, lapho kuqala izoziphindiselela luhlelo lwetebulungisa kanye izaphula-mthetho, kancane kancane azibonayo uhlamvu omuhle kuqala njengoba lo mbulali. Futhi khumbulani obaziyo - ke kumele kumiswe. Futhi akekho umlingisi emaphakathi noma esemqoka umlingisi - isakhamuzi ezigcina umthetho Dzherard Batler kakade - akakubangeli ukuzwelwa. Futhi reconversion Ommeli oNsundu waseMelika we omelene e uhlamvu "ezinhle" kancane iyadida. Akuwona wonke umuntu ungashintsha ngokushesha kangaka, kungani izibukeli eziningi futhi kukhona dissonance yobuchopho.
A mpikiswano kwabheduka zonke
Kuphele iminyaka ecela kwemihlanu, lapho ihamba khona ngokusebenzisa izikrini emhlabeni wonke movie "Umthetho Ezithobela Citizen", nabalingisi izinhlamvu naye, futhi impikiswano phakathi ifilimu a baxgeki nezibukeli abavamile futhi bengayeki. Phela, asivamile ukubonwa ifilimu strip ne isiphetho okungavamile, ne emajele futhi bacindezeleke neziboshwa bokusungula ngubani ziyasiza kangangokuthi ngisho ngaphambi kokuba aboshwe, baphoqwa ukuthi bahambe nqunu. Le movie hhayi kuphela kukhanye up kusihlwa, kodwa futhi kubangele ukuba uzindle vicissitudes eziningi zefilosofi zezwe, ngokuqinisekile kokushiya aftertaste yalesi Thriller.
Ukwakhiwa: sauna kusuka ibha ngezandla zakho endaweni
I-Blitzkrieg yilokho i-Wehrmacht ehlukumezile
Hlanganisa izithombe ku-MS Paint